I-Anchor Bolts, Stud Bolt, U-Bolt-Isivalo seTailian
Njengexabiso eliphambili lokuhombisa iipatio zangaphandle, sinikezela ngeemveliso ezilungileyo.
I-Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. ifumaneka kwisiThili saseYongnian, kwisiXeko saseHandan, kwindawo enkulu yokuhambisa imveliso yase China.
Iimveliso zadlula kwinqanaba elingaphezulu kwama-90%
ngaphezu kwama-300 abaphathi
amandla emveliso yoyilo ngonyaka iitoni ezingama-50000
Umzi mveliso wethu usebenza ngokuvelisa: i-anchor bolt, i-stud bolt, i-U-bolt, i-U-hoop, i-brace brace, i-steel bolt, i-cylindrical welding nail, i-hot-dip barts bolt, i-iron tower bolt, i-screw screw, i-bolt ipleyiti, i-bolt yezemigodi, uthotho lwe nut, iinxalenye ezikhethekileyo, njl.
isebenzisa izinto ezikrwada ezikumgangatho ophezulu ezivela kumatshini wokusila omkhulu weshishini kumashishini amakhulu emveliso yentsimbi nakwimimandla, kwaye iqinisekisa umgangatho wezinto ngelixa ulawula ngokungqongqo umgangatho. Inkampani ipasile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001.